Dheer u socdaalay tareenka ee dunida waa mid aad u dheer! sodcaalladoodii Kuwani waxay qaadan kartaa dhowr maalmood oo ay ku daboolaan kun oo miles.
Tani safaradiisa safarka iyada oo Southeast Asia ka Bangkok in Singapore. joogsato The tareenka ee River Kwai iyo Kuala Kangsar. Duration safarka midkood waa 3 ama 4 maalmood. Intaa waxaa dheer, sodcaalladoodii oo inta badan qaataan meelaha maalmaha fasaxa. Intaas waxaa sii dheer, hoyga waa gaarka loo leeyahay iyo wax xunna lagu qurxiyey. Maxaa yeelay, hoyga dheggan waxaa ugu wanaagsan waxaa ku haboon u safraya Solo.
First of dhan, ma jiro wifi on this safarka transcontinental. Sidaas, diyaar garow in aad waqti eegaya muuqaal ah. Maxaa yeelay, buuraha, kaymaha iyo muuqaalka dhirta kale Canadian waxaad arki doontaa waa breathtaking. Safarku wuxuu ka bilaabmay Vancouver iyo dhamaado Toronto. Ku raaxayso baabuurta qarsoodiga raaxo, halka aad ka heli bidhaaminaya ee faras duur, deerada iyo xataa orso.
Tani waxay safar tareen dheer qoreysa stretch ugu dheer ee wadada toosan tareenka ee dunida. marka hore, Rakaabka u hesho in ay la kulmaan width of Australia. Intaa waxaa dheer, muuqaal ka mid ah waterfalls, kaymaha iyo buuraha buluug. Sababtoo ah oo dhererkiisu, waxaa jira joogsiyada badan oo muhiim ah oo ku saabsan this wadada. joogsato waxaa ka mid ah Broken Hill, Adelaide, Barossa Valley, Kalgoorlie, Cook, iyo Rawlinna. Tigidhada tareenka safarka this waa qaali la qiimaha uu ka bilaabanayo ka badan $600.
Inkasta oo tareen tani waa dheer trans-Yurub wadada kaliya ayay qaadataa 2 maalmood si ay u dhamaystiraan. Tareenka ayaa ka dhigeysa in ka caasimada Faransiiska oo Gaaray magaalada Ruush. Maxaa yeelay, sodcaalku this dhex marta Belarus waxaad u baahan doontaa a visa Belarus in ay u safraan. Intaa waxaa dheer, aad u baahan tahay fiiso in ay galaan Russia.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/longest-train-journeys-world/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)